ဟဒီးဆ်: အကြင်သူသည် လူအုပ်စုတစ်စုဖြင့် တူဆင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ထိုအုပ်စုအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အကြင်သူသည် လူအုပ်စုတစ်စုဖြင့် တူဆင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ထိုအုပ်စုအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် မုန်းတီးမှုထားခြင်း။ . တူဆင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း။ .
အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်အုမရ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်တော်မူသည်။ အကြင်သူသည် လူအုပ်စုတစ်စုဖြင့် တူဆင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ထိုအုပ်စုအနက်မှပင်ဖြစ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဟစန်အဆင့်ရှိသည်။ - အဗူဒါဝူဒ်ကျမ်း။
ဤဩဝါဒသည် အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သူတော်ကောင်းတို့အား အတုခိုးသူသည် သူတော်ကောင်းပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်အတူ (ကိယာမသ်နေ့တွင်) စုရုံးခြင်းခံရမည်။ ကာဖိရ် ငြင်းပယ်သူများ၊ အပြစ်ကျူးလွန်သူများအား အတုခိုးသူသည် ၎င်းတို့၏ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင်ရှိပြီး ၎င်းတို့နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။
1: ကာဖိရ်တို့ကို အတုခိုးခြင်းမှ သတိပေးတားမြစ်ထားသည်။
2: သူတော်ကောင်းတို့ကို အတုခိုးရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
3: အကြောင်းခံများ၏အမိန့်သည် ရည်ရွယ်လိုက်သည့် အမလ်ကျင့်ဆောင်မှု၏ အမိန့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို အတုခိုးခြင်းဖြင့် စိတ်တွင်း၌ ချစ်ခင်မှုကို ပေါ်ပေါက်စေသည်။
4: ဆင်တူအောင် တုပခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော အမိန့်ပညတ်ချက်များသည်ကျယ်ပြန့်လှပြီး အားလုံးကို ခြုံငုံ၍တင်ပြရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တုပခြင်း၏ အမျိုးအစားများကွဲပြားခြင်းနှင့် ၎င်းတို့တွင်ရှိသော ဆိုးကျိုးများပေါ်မူတည်ပြီး ၎င်း၏အမိန့်သည်လည်း ကွဲပြားခြားနားသွားသည်။ အထူးသဖြင့် ယနေ့ခေတ် အချိန်အခါမျိုးတွင် ပို၍ပင်ကွဲပြားသည်။ ထို့ပြင် မတ်စ်အလဟ် ပြဿနာတိုင်းကို သာသနာ့ အထောက်အထားများဖြစ်သည့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် နှင့် ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော်တို့နှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။
5: ကာဖိရ် သွေဖည်ငြင်းပယ်သူများနှင့် ဆင်တူအောင်တုပခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းဟူသည် ၎င်းတို့၏ ဘာသာရေးနှင့် သီးသန့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများအား တုပဆောင်ရွက်ခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ကိစ္စများမဟုတ်သည့် စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာများကို သင်ယူခြင်းအစရှိသည့် အလားတူကိစ္စများသည် တားမြစ်ချက်တွင် မပါဝင်ပေ။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းနှင့် မုန်းတီးမှုထားခြင်း။ . တူဆင်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း။ .